Guta Game Studio: guta manejimendi vhidhiyo mutambo | Linux Vakapindwa muropa
Guta Game Studio hazvisi zvakare kana zvakaderera pane bhizinesi simulator yevagadziri vemavhidhiyo emitambo. Ehe, sezvaunenge uchinzwa icho, chokwadi ndechekuti pane atove simulators ezvinenge zvese, kubva mukugadzirisa mota simulation, maPC, chitima simulation, ndege, nhangemutange dzemotokari, mafiraya, mapurazi, uye hombe nezvimwe.
El August 24 akagamuchira hombe kuvandudza, kuenderera mberi nekuvandudza izvo zvaive zvatove mune yapfuura vhezheni yeGuta Game Studio. Mushure mekupinda muKutangisa Kwekutanga kwemakore, iwe ikozvino unowana chihombe chiyeuchidzo chinosiya iyo Yekutanga Kuwana nguva zvakare. Uyu mutambo wevhidhiyo unogona kuwanikwa zvese muValve Steam chitoro uye muGOG.
Yakafuridzirwa nevamwe yakafanana mitambo yemavhidhiyo. Iyo yakazara zvizere nemabasa (kudzidziswa, kuvaka, kugadzirisa, piracy, kutsemuka, ...) kuitira kuti iwe ugone kubata bhizinesi rako nevashandi vako uye nekudaro ugadzire dhijitari yevaraidzo empire, gadzira yako chitoro, gadzira yako wega vhidhiyo mutambo koni, etc.
Kana iri nhoroondo yeGuta Game Studio, inotanga muma 70s, iine tekinoroji yese yeRetro uye mukuzara kuzere kwema classics. Kubva ipapo unenge uchivaka bhizinesi rako remavhidhiyo bhizinesi uye zvishoma nezvishoma uchikura kusvika iwe wafambira mberi, kugadzira mazita, kushanda nema graphic engines, kushambadzira zvigadzirwa zvako, kubata nevashandi vako, kushora pamakwikwi, nezvimwe. Pachagara paine zvinonakidza uye chimwe chinhu chekuita ...
Zvakare, sechirevo chekupedzisira, ndinoda kutaura kuti City Game Studio yakavakirwa pane yakavhurika sosi tekinoroji, sezvo yakaitwa ichishandisa iyo injini injini Godot Injini.
Mamwe mazita ezita - Shanyira yavo saiti pane Valve's Steam chitoro
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Guta Game Studio: guta manejimendi vhidhiyo mutambo
Xavier akanzi Binogure akadaro
Merci pour cet chinyorwa ça fait pleasir de voir le monde Linux parler d'un jeu fait sous Linux (Debian 11 ne KDE Plasma).
Petite verenga zvakare:
> Pa 24 Août
Hélàs j'ai prposé le jeu a GoG, et ils m'ont dit qu'il était trop niche. Donc peji rekuvhota kuti utore GoG a été créé dont voici le lien:
Parcontre le jeu inowanikwa pane Itch ( https://binogure.itch.io/city-game-studio ), Mukufa pane achète une clé Steam tout zvakapusa.
Pindura kuna Xavier aka Binogure